ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဇာတိမြေ (သို့မဟုတ်) သတိတရ ရှိလှတဲ့အိမ်”.......(၂)
အညာနဲ့ တွေ..တသင်းသင်း နဲ့ပါလား။ ဗမာပြည်ကြီးက.. တောင် ဆိုလည်း..တောင်မို့.. မြစ် ဆိုလည်း မြစ်မို့.. ရွာဆိုလည်း ရွာမို့.. တယ် သာယာ တာနော်...။ ဒီစာ ဖတ် ရင်း..တကယ့်ကို..ခံစား မြင်ယောင် ရပါတယ်။
ကိုပေါ အရင်ဆုံး အပေါ်က ကောမန့် ၁ ကို ဖျက်ပစ်ပါ။ အဲဒါ ဗိုင်းရပ်တွေပဲ။
ကိုပေါတို့ ဆီဒယ်အိုးကို သဘောကျသဗျိုး။ ခုလို ကိုယ့် ဇာတိမြေကို သေသေချာချာ ရေးပေးတာကိုလဲ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ကေ ပြောသလိုပဲ။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ အင်မတန် သာယာဝပြောနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးပါ။ အုပ်ချုပ်သူတွေကြောင့် ခုလို သူများနောက်မှာ ဖြစ်နေရတာ ..
ပြည်တော်ပြန်ဖြစ်ကြရင် အပြန်အလှန် အလည်အပတ် လုပ်ကြမယ်နော်။ မဒမ်ပေါကိုလဲ နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့...
yes, after reading this , i really like to visit my country again , feel the nature. during 1979~80 when I working in TSC ( Technical Service Corporation) burma, I was travel to Pagan as so call tour of duty. When we were in Pagan , my senior U Soe win ( E / E ) told me that you will never find this kind of scenario in the world except burma. The thing what I viewing is Pagoda, and beautiful sunset with Irrawaddy river background by Kyun Chanug Gas turbine factory and Fertilizar factory.
မဒမ်ပေါ အရင်ကဒီလောက်ချောမှန်းမသိဘူး ဒီဓါတ်ပုံလေးကြည့်မှ သိတော့တယ် နမြောတောင်သွားတယ်
When I read this, I rememberd the time that I stayed in Minbu. I normally pass your place whenever I go to Bagan airport. One time, I went to your village to findacook for us, we stayedacouple of hours there and came back.I told my colleague that this is our friend's place. At that time, you may be in S'pore already.
Very nice to remember our hometown, childhood, etc.....
တမာရနံ့ သင်းပျံ့ တဲ့ အညာမြေ၊ အညာလေ၊ အညာရေ နဲ့အိမ်အလွမ်း ဖွဲ့ ထားတာလေး က ဆွတ်ပျံ့ လွမ်းမောစရာ မို့ကွန် မန့် ရေးမိလောက်အောင်..နှစ်သက် ပါတယ်…thanks..
စားစရာတွေရော၊ ရုပ်ရှင်ဖွက်တမ်းအကြောင်းရော (ကျိုင်းတုံမှာလည်းဆော့ကြတယ်)၊ ကိုပေါမဒမ်ပေါစုံတွဲပုံရော၊ အညာအကြောင်းရော အားလုံးကိုသဘောကျတယ်ဗျား။
ကိုပေါရေ...အညာချစ်သူမို့ အညာရနံ့သင်းနေတဲ့ ဒီpostလေးကို အရမ်းနှစ်သက်မိပါတယ်။ မကွေး၊ ရေနံချောင်း၊ ချောက်၊ ကျောင်းတော်ရာ အကုန်ရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေမို့ မြင်ယောင်မှန်းဆလွမ်းရပါတယ်။ ဂျူးရဲ့ ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မုန်းချောင်းနားက ကုန်းဇောင်းရွာလေးကို ကိုပေါရဲ့ အရေးအဖွဲ့ကြောင့် ပိုရောက်ဖူးချင်သွားတယ်။ ကျူကျူဟင်းလေးလဲ စားကြည့်ချင်တယ်။ (ဟိုဓာတ်ပုံကလေးကို ဒွေးနဲ့ထက်ထက်မိုးဦးလို့ထင်နေတာ)